Barnaamijka Kedyka ee Medcare | LawHelp Minnesota
Barnaamijka Kedyka ee Medcare
Medicare Savings Programs (PDF)352.88 KB
Waxaa aad ku bixisaa lacag fara badan caymiska caafimaadka ee Medicare. Waxaa kula haboon in aad tixgeliso Barnaamijka Keydka ee Medicare.
Waa maxay Barnaamijka Keydka ee Medicare?
Waa Ceymiska Caafimaadka ee Medicaid ee Gobolka kaasoo kaa caawin kara inuu bixiyo lacagta bil kasta ee Medicare iyo lacagta aad bixiso booqashada dhakhtarka. Haddii aad ka soo baxdo shuruudaha ku xiran Medicare, waxa kale oo suurogal ah in aad ka soo bixi karto shuruudaha mid ka mid ah 4ta Barnaamijka ee Keydka Medicare. (MSP). Xaaladaha qaarkood, waxaa suurogal ah in aad dheeraad ahaanm u isticmaalo kari karto ceymiska Caafimaadka ee Gobolka (Medical Assistance) ee laguu ogolaado. Dakhligaaga ayaa lagu ogaanayaa,haddii uu jiro, barnaamika aad xaqa u leedahay.
Waa maxay 4ta Barnaamij iyo Shuruudaha ku xiram?
Ka Soo baxa Shuruudaha Dadka Heysta Medicare (QMB)
Waxa uu bixiyaa lacagta bil kasta ee Medicare Part A (Qeybta A) (ilaa $458/bishiiba)
Waxa uu bixiyaa lacagta bil kasta ee Medicare Part B
Haddii lacagta bilka ee Qeybta B laga jeego lacagta kaa soo gasha lambarka bulshada oo dakhligaagu yahay $87,000 ama uu ka yar yahay ($174,000 haddii aad xaas tahay), oo lacagta lgaa doonayo bilkasta ay tahay $144.60.
Waxa uu bixiyaa kharsh wadaagga Medicare (lacagta booqashada dhakhtarka iyo qeybta kugu soo beeganta) ee Adeegga Medicare ee ay bixiyaan dhakhaatiirta ka soo baxa shuruudaha Medicare.
Waxa aaad ka soo baxday shuruudaha QMB haddii:
Haddii aad horey isu diiwaan gelisay ama aad ka soo baxdo shuruudaha Medicare Qeybta A
Dakhligaaga uu yahay ama uu ka yar yahay $1,084 bishiiba ($1,458 bishiiba haddii aad xaas tahay)(xadka u go’an dakhliga waa mid isbedelaya 7/1/2021)
Hantidaadu ay ka yar tahay $10,000 ($18,000 haddii aad xaas tahay)
Adeegga Kooban ee Macaashka Medicare (SLMB)
Waxa uu bixiyaa lacagta bil kasta ee Medicare Part B (Qeybta B) (qiyaastii 144,60$)
Waxa aaad ka soo baxday shuruudaha SLMB haddii:
Haddii aad horey isu diiwaan gelisay ama aad ka soo baxdo shuruudaha Medicare Qeybta A ama aad ka soo baxday shuruudaha Medicare Qeybta B
Dakhligaaga uu yahay ama uu ka yar yahay $1,296 bishiiba ($1,744 bishiiba haddii aad xaas tahay)(xadka u go’an dakhliga waa mid isbedelaya 7/1/2021)
Hantidaada ay ka yar tahay $10,000 ($18,000 haddii aad xaas tahay)
Shaqsiyaadka Ka Soo baxa Shuruudaha (QI)
Waxa uu bixiyaa lacagta bil kasta ee Medicare Part B (Qeybta B) (qiyaastii $144.60)
Lacagta barnaamijkan waa mid kooban. Waxaa lacagta loo bixiyaa sida loo soo kala horeeyo.
Waxa aaad ka soo baxday shuruudaha QI haddii:
Dakhligaaga uu yahay ama uu ka yar yahay $1,456 bishiiba ($1,960 bishiiba haddii aad xaas tahay)(xadka u go’an dakhliga waa mid isbedelaya 7/1/2021)
FIIRO GAAR AH: Waa in aad dooneyso Barnaamijka Kedyka ee Medcare. Mararka qaarkood degmada ayaa kaa diiwaan gelisa Ceymiska Caafimaadka Gobolka (Medical Assistance) oo lacag aad u fara badan aad bixineyso halkii aad iska diiwaan geli laheyd barnaamijka QI.
Haddii uusan jirin kharash aad jeebkaaga ka bixiso ee bil kasta ee biilasha caafimaadka oo ka badan lacagta ceymiska cafimaadka ee farah badan, Barnaamijka Ceymiska Caafimaadka ma bixinayo.
Dadka Naafada Ah Ee Ka Soo Baxa Shuruudaha Shaqada (QWDI)
Haddii aad ka soo baxdau shuruudaha ku xiran MA ama MA ee Dadka Shaqeeya Ee Naafada Ah (MA-EPD,) kama aadan soo bixin shuruudaha QWDI.
Waxa aaad ka soo baxday shuruudaha QWDI haddii:
Da’daadu kayar tahay 65 jir
Aad indhoole ama naafo aad tahay.
Waxaa lagaa joojiyey in aadan xaq u laheyn Macaashka naafada ee Lambarka Bulshada ama Medicare oo aan aadan bixineyn lacagta bil kasta waayo dakhligaaga ayaa la sareeya heerka u degsan Lambarka Bulshada.
Dakhligaaga uu yahay ama uu ka yar yahay $2,147 bishiiba ($2,894 bishiiba haddii aad xaas tahay)(xadka u go’an dakhliga waa mid isbedelaya 7/1/2021)
Hantidaada ay ka yar tahay $4,000 ($6,000 haddii aad xaas tahay)
Sidee Ayaan Ku Codsadaa?
Wac ama soo booqo xafiiska gargaarka ee degmada oo weydiiso in ay ku siiyaan foomka wadajirka ah ama codsiga caafimaadka ceymiska.
Buuxi codsiga oo soo celi adiga oo soo raacinaya cadeymaha lagaaaga baahan yahay xafiiska gargaarka ee degmada. Waxaa jira liis ay ku qoran yihiin cadeymaha lagaa doonayo in aad codsigaaga soo raaciso.
Hay’adda ayaa go’aan ka gaareysa haddii aad ka soo baxday shuruudaha.
Soo wac Senior LinkAge Line ee (800) 333-2433 si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Telefoonada iyo xadka u go’an shuruudaha waa mid isbedesha sanadba sanadka ka dambeeya. Haddii uu wax yar kordho dakhligaaga weli waa in aad codsataa. Ka hubi isbedelka halkan https://mn.gov/dhs/.
Guji Qoraalada Maktabadda eDocs ee dhinaca midigta aah ee kore ee bogga.
Ku qor 3461A sanduuqa baarashada oo dooro luqadda aad dooneyso in aad ku hesho foomka.